Dhukaasa Filooriidaa: Aleellaa mana barumsa sadarkaa ol aanaa keessa tureen yoo xiqqate 17 du'aniiru - BBC News Afaan Oromoo
Dhukaasa Filooriidaa: Aleellaa mana barumsa sadarkaa ol aanaa keessa tureen yoo xiqqate 17 du'aniiru
Barattoonni yeroo maatii isaaniitti makaman
Dhukaasa namni waggaa 19 ta'e mooraa mana barumsaa sadarkaa ol Filooriidaa, Paarkilaanditti baneen yoo xiqqaate namoonni 17 du'uu isaanii poolisiin gabaaseera.
Shakkamaan Nikkoolaas Kiruuz kan ganna 19, duraan mana barumsaa sanatti barataa turee kan ari'atamedha.
Dhukaasni waan itti fufeef barattoonni dhokkachuuf dirqamaniiru poolisiinni ammoo gamoo sana keessaa daddarbaa turaniiru.
Akkuma dhukaasni banameen: Namichi Filooriidaa qawwee qabate kun hedduu irratti dhukaasa bane.
Aanga'waan Biroowaardi Kaawontii Iskoot Israa'el ripoorterootatti akka himetti Kiruuz mana barumsaa osoo seenee namoota 12 hin ajjeesiin dura alatti namoota sadii ajjeese.
Namoonni lama ammoo booda erga hospitaala seenanii du'an.
"Dhumaatii hamaadha. Jechoonni ittiin ibsan hin jiru," jechuun Israa'el fuula tiwiiterisaarratta booda ibseera.
Giddu-gala Fayyaa Birowaarditti ogeessi fayyaa Dr. Evaan Booyaar akka ripoorterootatti himetti gaafa Roobii namoonni 17 gara hospitaalota naannootti geeffamaniiru.
Kiruuz warra wallaansa argatan keessaa tokko kan ture yommuu ta'u boodarra to'annaa poolisii jala galeera jedhe. Namoonni sadii haala yaachisaarra kan jiran yommuu ta'u kan biroon sadii ammoo haala gaariirra jiru.
Hanga ammaa eenyummaan namoota miidhamanii adda baafamaa jira. Akka Israa'el jedhutti leenjisaan kubbaa miilaa warra du'an keessaa isa tokkodha garuu maqaan hanga ammaatti gadi hin dhiifamne.
Aleellaan kun attamiin itti fufe
Namoonni argan akka jedhanitti shakkamaan kun jalqaba aleellaa kana osoo hin raawwatiin dura akeekkachiiftuu balaa ibiddaa butee bane.
Poolisiifi gareen SWAT mooraa sana dhuunfachuun barattoota mana barumsaa Paarkilaanditti argamu Miyaamii Kaabaa irraa naannoo saatii tokko kan fagaatu kana keessaa baasuu eegalan, yerooma kanatti ambulaansonniifi maatiin mana barumsichaa guutan.
Akka waraabbiin viidiyoo agarsiisutti ijoolleen garee xixiqqaadhaan mana barumsaa sana keessaa baafamaa turan
Akka ibsa poolisiitti, obbo Kiruuz, namni "sababii naamusaatiin" ari'atame erga mana barumsaadhaa ba'ee saatii tokkoon booda to'annaa poolisii jala oole.
"Marsariitii isaafi fuula miidilyaalee hawwaasummaa irratti irra ture qorachuu jalqabneerra... baayyee baayyee kan nama jeequdha," jedhe Israa'el.
"Kuni nuuf guyyaa fokkisaadha," To'ataan mana barumsaa Kaawontii kan ta'an 'Robert Runcie'.
Barattoonni hedduun sagalee dhukaasaa osoo hin dhaga'iin dura sagalee akeekkachisa balaa ibiddaa waan dhaga'aniif meeshaa addaa se'an.
Barattoonni akka miidiyaaleen Ameerikaatti himanitti, yeroo dhukaasni dhaga'amaa ture minjaala jala dhokatan, akkasumas karra jala dhokatan.
Barataan Bayilii Voosbergi jedhamu akka ibsetti: "Ani waan akka sagalee ibidda dhaamsaa fakkaatu tokko yeroon dhaga'u gara hiriyyaakoo tokko yeroon ilaalu akkan dhaga'e na gaafate."
"Yeroodhuma sanan bare. Waan tokkollee isatti hin himne. Dallaa mana barumsaarra utaaleen gara daandiitti bahe. Akkuma ani achi ga'een konkolaatonniifi gareen poolisoonni marsuu eegalan elekoopteroonnis mataarra nu marsuu eegalan."
Fakkii kallattii televisvinii wayita barattooon baafaman kan fudhatame
Maataa barattootaa keessaa tokko kan ta'e Kaa'esaar Figu'eeroo akka Oduu CBS tti himetti intalli isaa yeroo naaf birmadhu jettu bakka dhokattee jirtuuti.
Innis yeroo isheen bilbiltuuf namichi namattti dhukaasaa jiru sun sagaleekee dha'uutiii naaf hin bilbiliin akka jedhe miidiyaaleetti hime.
"Daqiiqaa 20 osoo intalli kana keessatti maal keessa akka jirtu osoon hin dhaga'iin turuun dhiphina hamaadha. Jireenya koo keessatti daqiiqaa 20 baayyee dheeraa ta'edha," jedhe Obbo Figu'eeraan.
Balaa kanarratti yaadni namootaa maal fakkaata?
Pirezidaanti Doonaaldi Tiraampis gadda isaanii tiwiiteriidhaan ibsaniiru.
Bakka bu'aan mana maree kutaa sanaa Teed De'uuchis tiwiiteriidhaan: "Yeroon mana taa'ee oduu kana dhaga'u na dhukkube. Yerooma sanan aanga'aa achi jiru waliin dubbanne. Waanti kun hammaataadha."
Dhukaasawwan duraan mana barumsaa keessatti raawwatamanii turan waliin walbira qabamee attamitti ilaalam?
Akka qorannoo Of Eegannoo Qawwee jedhu Eviriitaawuniin gaggeeffamuun, aleellaan Roobii qaqqabe kun dhukaasawwan naannoo mana barumsaatti Ameerikaa keessaafi naannootti bara kana raawwatan isa 18ffaa ta'uu isaati.
Mudannoo dhukaasa mana barumsaatti bara 2018 keessa raawwater isa ja'affaadha.
Bara 2013 irraa kaasee manneen barnootaa Ameerikaa keessatti dhukaasawwan 291 gabaafamaniiru. Kunis giddu-galeessaan torbanitti tokkotu raawwatama.
Poolisiin US Kaappitaal Hiil irratti haleellaan raawwachuu mala jedhan